Manamboatra tranga ho an'ny serivisy marketing amin'ny mailaka Outsourcing
Ho an'ireo mpivarotra izay te-hitrandraka volamena betsaka kokoa avy amin'ny programa mailaka; marketing amin'ny mailaka any ivelany dia malaza haingana.
Ny marketing amin'ny mailaka tantanana dia afaka manana endrika maro, toy ny fanamboarana sy fitantanana ny fifandraisana mailaka miverimberina.
Mety tafiditra ao ihany koa ny fivoaran'ny atiny, ny fizarana ny lakandranon'akanjo, ny fitomboan'ny lisitra, ary koa ny fampidirana teknika tsy fantatra sy ny fomba fitaterana. Lava ny lisitra.
Na izany na tsy izany, rehefa manatona anay mangataka ny mpanjifanay serivisy mailaka tantanana ny ankamaroany dia satria izy ireo kivy ary mihafy sy mitsitsy.
Leo izy ireo. Tsy afaka mahita talenta an-trano mahafeno fepetra na siphon famokarana fanampiny (na fahaiza-manao) avy amin'ny mpiasa efa misy izy ireo, kanefa fantatr'izy ireo fa afaka ary tokony hanao be lavitra kokoa izy ireo.
Fahita izany. Amin'ny lafiny maro dia famaizana tsy manam-paharoa ny marketing amin'ny mailaka. Sarotra ny mailaka. Saingy amin'ny fomba hafa dia mitaky talenta sy faharetana tsotra izao. Sarotra ny mahita ireo fepetra roa ireo amin'ny loharano tokana na ekipa miasa mafy sy tsy dia mahay loatra.
Ny outsource dia miasa satria mamela ny mpivarotra hampiasa ny fahaiza-manao isan-karazany, nefa manam-pahaizana manokana ho an'ny mpiara-miasa aminy… na masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka na ESP izy ireo.
Ankoatry ny fahaiza-mamorona, ny fahaizana teknika ary ny herin'ny fandresen-dahatra (ilaina izany rehetra izany raha te handresy ny lalao mailaka ianao), mpiara-miombon'antoka amin'ny marketing amin'ny mailaka ihany koa no mitondra ny traikefa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny toby mpanjifa isan-karazany. Ity dia loharano tsy manam-petra ho an'ny hevitra vaovao izay manome antoka fa tsy ho lasa iharan'ny "eritreritra vondrona" ny ezaka ary atao avo lenta ny dolara rehetra laniana.
Mpivarotra mitahiry vola
Rehefa manapa-kevitra ny hamoaka ny marketing amin'ny mailaka azy ireo na hitazona azy ao an-trano dia maro tamin'ireo mpanjifanay no nijery voalohany ny dolara mba hahitana raha misy dikany izany. Mitandrina izy ireo fa tsy adala.
Andao hatrehana izany, mitaky fotoana ny serivisy marketing mailaka. Noho izany, amin'ny endrika iray na hafa, fotoana no loharanom-bolan'ny mpivarotra.
Izay no antony iray mampisy dikany ny outsourcing; mila fotoana kely kokoa.
Noho ny zavatra niainan'ny mpiara-miasa amin'ny mailaka nataonao teo amin'ny latabatra, dia kely fotsiny ny fiankinan-doha, satria mifandraika amin'ny fahaizan'izy ireo. Mahatsapa koa izy ireo fa mila manaporofo ny lanjan'izy ireo, isam-bolana.
Tsy afaka miteny amin'ny masoivoho rehetra aho fa nandany volana maro niaraka tamin'ny fandevenana ny tarehy saika ny interface sy API rehetra an'ny ESP. Fantatsika ny tanjany, ny fahalemeny ary ny fetrany. Nanamboatra fanentanana an'arivony izahay ary nanolotra serivisy ho an'ny consultant ho an'ny mpivarotra B2C sy B2B maro. Izany dia miteraka fahombiazana izay azo avy amin'ny traikefa ihany. Ny fahombiazana dia midika hoe kely ny fotoana, izay midika hoe kely ny vidiny.
Ankoatry ny fahombiazany, ny fanabeazana mitohy dia lasa fandaniana amin'ny mpanome tolotra. Ny fandaniana amin'ny karama, ny fotoana fitsaboana, ny fialantsasatra? Fugetaboutit.
Ny vidiny dia mazàna ambany noho ny an'ny mpiasa maharitra iray andro, na miankina amin'ny takiana, na dia ny fitehirizana vola be aza. Miverina indray amin'ny fotoana rehetra.
Raha mamoaka ivelany izy ireo, karazana ROI inona no antenain'ny mpivarotra? Iray ihany ny fomba hahitana izany: manomboha fiovam-po ary misafidy hendry. Mety handoa vola be ny mahita mpiara-miasa afaka miara-miasa amin'izy ireo na ny ekipany ao an-trano, na angamba te-hamoaka ny ezaka amin'ny marketing amin'ny mailaka manontolo izy ireo, lasopy amin'ny voanjo.
Tags: mailaka MarketingNewsletterOutsourcing,
SaaS miova hanolotra Database ho serivisy
Jun 1, 2010 ao amin'ny 12: 08 PM
Lahatsoratra tsara, Scott. Zahao ity lahatsoratra ity raha misy antony fanampiny mahatonga ny mailaka outsourcing misy dikany: http://lunchpail.knotice.com/2010/05/28/why-outsourcing-email-makes-sense/